Laftagareen oo dalbaday in dadka laga qaado Bandowga la saaray | SMC
Home WARARKA MAANTA Laftagareen oo dalbaday in dadka laga qaado Bandowga la saaray
Laftagareen oo dalbaday in dadka laga qaado Bandowga la saaray
Cabdi Casiis Xasan Maxamed(laftagareen) ayaa ugu baaqay dadka ku nool deegaannada Maamulkaas inay qaataan talooyinka Caafimaad si looga hortago faafintaanka Cudurka Coronavirus.
Waxaa uu sheegay in dadka looga baahan yahay inay yareeyaan socodka badan iyo isu imaatinka sidoo kalena ay taxadar dheeraad ah muujiyaan.
Cabdi Casiis Xasan Maxamed(laftagareen) waxaa uu sheegay inay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed laga yareeyo culeysyada faraha badan sida in laga qaado bandowga sidoo kalena ay ka maamul ahaan ay dadaal badan bixin doonaan sioo ilaaliyo badqabka Caafimaad ee Bulshada.
Hadalka Cabdi Casiis Xasan Maxamed(laftagareen) ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Magaalooyin kamid ah dalka sida Muqdisho,Kismaayo iyo Magaalooyin ka tirsan Puntland xilliyada habeenkii bandow la saaray.
Previous articleTaliska Ciidanka xooga oo sheegay inay qabteen Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Next articleDhageyso Qaar ka mid ah Dadka Danyarta ee ku Nool Baydhabo oo Deeq Afurin ah la gaarsiiyay.